एमालेका नेता बेरोजगार ! - Enepalese.com
एमालेका नेता बेरोजगार !
इनेप्लिज २०७२ पुष २ गते १:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २ पुस । नेकपा एमालेका दुई हजारभन्दा बढी नेता बेरोजगार भएका छन् । महाधिवेशनपछि पार्टी सरकारमा गए पनि हजारौँ नेताले पार्टीिभत्रै काम पाउन नसकेका हुन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
एमालेले केन्द्रीय विभागहरुको संख्या बढाएर ३१ पुर्याएको छ । एउटा विभागमा कम्तीमा २५ नेता सदस्य हुन्छन् । विभागहरुले पूर्णता पाउँदा सात सय ७५ नेताले काम पाउँथे । तर, महाधिवेशन भएको १७ महिना बित्दा पनि विभागहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै पार्टीको उपत्यका र प्रवाससहित १६ अञ्चल कमिटी छन् । तर, कसैले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । अञ्चल कमिटीमा ६५ सम्म सदस्य रहनसक्ने व्यवस्था छ । यस हिसाबले अञ्चल कमिटीमा एक हजारभन्दा धेरै नेतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।